Amaflethi Iyathengiswa in Poole, Dorset
Amaflethi in Poole
Amaflethi in Dorset
1 - 10 ka 470 Uhlu
Ishicilelwe ngu Frost Co
Ishicilelwe ngu Meyers Estate Agents
Ishicilelwe ngu Key Drummond
Ishicilelwe ngu Link Homes Estate Agents
Ishicilelwe ngu Mays Estate Agents
Ishicilelwe ngu Berkeleys Estate Agents, Canford Cliffs
Ishicilelwe ngu Anthony David Co
IDorset (;; yakudala: iDorsetshire) iyisifunda esiseSouth West England ogwini lwe-English Channel. Isifunda esinemikhosi sihlanganisa nezindawo ezinobumbano eBournemouth, Christchurch nePoole neDorset. Kumboza indawo engamakhilomitha-skwele angama-2,653 (1,024 sq mi), iDorset imingcele iDevon entshonalanga, iSomerset enyakatho-nentshonalanga, iWiltshire enyakatho-empumalanga, kanye neHamphire empumalanga. Idolobhana lesifunda yiDorchester eseningizimu. Ngemuva kokuhlelwa kabusha kohulumeni basekhaya ngonyaka we-1974 umngcele waleli dolobha wandiswa waya empumalanga ukufaka amadolobha aseHampshire eBournemouth naseChristchurch. Cishe isigamu sabantu sihlala endaweni yaseSouth East Dorset, kanti lonke leli dolobha iningi lasemakhaya linabantu abaphansi. Leli dolobhana linomlando omude wokuhlala kwabantu kusuka emuva esikhathini se-Neolithic. AmaRoma anqoba isizwe sabomdabu abangamaDorset amaCelt, kwathi kuma-Middle Middle Ages, amaSaxon axazulula le ndawo futhi enza iDorset yaba yiShuve ngekhulu le-7. Ukuhlasela okokuqala kwamaViking esiQhingini saseBrithani kwenzeka eDorset phakathi nekhulu lesishiyagalombili, kwathi iBlack Death yangena eNgilandi eMelcombe Regis ngonyaka ka-1348. UDorset ukubone ukungezwani kombango okuningi: kwi-English Civil War, ukuvukelwa kwengqondo kwaqothulwa u-Oliver Amabutho kaComwell empini ebiyelwe eduzane naseShaftesbury; ukuvinjezelwa okulahliwe kweMonmouth kwaqala eLyme Regis; futhi iqembu labasebenzi basemapulazini abavela eTolpuddle baba nesandla ekwakheni inhlangano yabasebenzi. Ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba, uDorset wabandakanyeka kakhulu kumalungiselelo okuhlasela kweNormandy, futhi amachweba amakhulu ePortland nePoole ayengamaphuzu amabili okuqala. Indawo yokuqala bekuyindawo yokuhamba ngomkhumbi kuma-Olimpiki Ehlobo Lango-2012, futhi womabili anamakilabhu noma aqashe izindawo zokuhamba ngomkhumbi, ukugibela izindiza zomshayeli weCornish, ukuhamba olwandle kanye nokuhamba ngezikejana ezinamandla. IDorset inendawo ehlukahlukene enezikebhe eziphakeme ezibanzi eziphakeme, imigodi yamatshe amade kanye nezigodi zobumba eziphansi. Ingaphezulu kwesigamu sale ndawo iqokiwe njengoMkhakha Wobuhle Bemvelo Obungafani. Amaphethelo amathathu osogwini lwawo ayingxenye yeSayithi Yamagugu Omhlaba AseJurassic Coast ngenxa yokubaluleka kwawo ngokwendawo nangokwe-palaeontologic. Inezimo zomhlaba eziphawuleka njengeLulworth Cove, Isle of Portland, Chesil Beach neDurdle Door. Ezolimo ngokwesiko kwakuyimboni enkulu yeDorset kepha manje seyinciphile futhi ezokuvakasha seziye zaba zibaluleke kakhulu kwezomnotho. Akunazimoto eDorset kodwa inethiwekhi yemigwaqo engu-A enqamula kuleya ndawo kanye nemizila emibili emikhulu yesitimela exhuma eLondon. IDorset inamachweba ePoole, Weymouth nasePortland, kanye nesikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele eduze kweBournemouth. Le ndawo ineminyuziyamu ehlukahlukene, imidlalo yeshashalazi nemikhosi, futhi isingathwe kwiGreatersetset Steam Fair, okungenye yemicimbi emikhulu yohlobo lwayo eYurophu. Kuyindawo azalelwa kuyo uThomas Hardy, obesebenzisa isifunda njengendawo eyisisekelo esetshenziswayo yamanoveli akhe, noWilliam Barnes, oshaya izinkondlo zakhe zigubha ngolimi lwasendulo lweDorset.